4 Layliyo Ka dhan Ah Qoorgooyaha | Jimicsiyada xoojinta, tababarka iyo kahortagga
4 Layliyo Ka dhan Ah Qoorgooyaha
30 / 11 / 2016 /0 Comments/i Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
Miyaad la ildaran tahay osteomyelitis oo aad baad u daashay? Halkan waxaa ah 4 layli oo wanaagsan oo xoojin kara muruqyada saxda ah oo kaa caawin kara ka hortagga osteomyelitis.
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan laylisyada, ikhtiyaarada daaweynta ama tababarka, waa lagu soo dhaweynayaa inaad nagala soo xiriirto Facebook eller Channelkeena YouTube.
Osteomyelitis badanaa waxay noqotaa mid soo noqnoqota iyada oo aan loo helin hab sax ah
Waxaad kubilaabatay bilow wanaagsan oradka, laakiin markaa way dhacdaa… mar labaad. Cudurka Osteomyelitis ee mar labaad. Baadhitaano yar ayaa abuuraya xanaaq iyo jahawareer sida osteomyelitis soo noqnoqda. Xuubka lafuhu wuxuu dhex fadhiyaa labada lafood ee shinka ee lugta hoose; tibia (tibia gudaha) iyo fibula (tibia dibadda). Culeys xad dhaaf ah ama rar aan sax ahayn waxay u horseedi kartaa falcelin barar ah oo nudaha ah, taas oo soo saarta xanuunka marka xoogga la saarayo cagta iyo canqowga.
Maqaalkan waxaad ku baran doontaa waxyaabo badan oo ku saabsan, iyo waxyaabo kale:
1. Maxaad u qaadataa osteomyelitis?
2. Maxaa sababa osteomyelitis soo noqnoqda?
3. Waxyaabaha halista u ah Osteomyelitis
4. Jimicsiyada iyo Tababarka ka dhanka ah Osteomyelitis
5. Daaweynta iyo Tallaabooyinka Is-ka-hortagga Osteomyelitis
Miyaad taqaanaa qof aad u xanuunsanaya osteomyelitis? Si xor ah ula wadaag maqaalka iyaga.
Guji badhanka hoose si aad ula wadaagto maqaalka warbaahinta bulshada - haddii la doonayo.
Ma la yaabaysaa wax mise waxaad rabtaa in badan oo ka mid ah xirfad-yaqaannada noocan ah? Nagala soco boggayaga Facebook «Vondt.net - Waxaan kaa yareyneynaa xanuunkaaga»Ama Channelkeena Youtube (wuxuu ku furmayaa xiriir cusub) si aad u hesho casriyeyn caafimaad oo maalinle ah iyo barnaamijyo jimicsi oo lacag la'aan ah.
Maqaalkan waxaan diirada saari doonaa xoojinta muruqyada yareyn kara isla markaana xaddidi kara culeyska saamaynta aaggan - tan waxaa lagu sameyn karaa, iyo waxyaabo kale, iyadoo xooji muruqyada sinta, muruqyada gluteal iyo cagaha cagaha. Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto adoo adeegsanaya boggayaga Facebook hadaad hayso faallooyin, galid ama su'aalo.
Cudurka osteoarthritis iyo xanuunka la xiriira retina waxaa sabab u ah ciriiriga unugyada jilicsan ee ku dhega tibia iyo murqaha u dhow. Taasi waa, culeysku wuxuu ka badan yahay awooddaada - oo nudahaas waxyeelloobay ayaa la sameeyay halkii laga samayn lahaa unugyo caadi ah aagga ay dhibaatadu saameysey. Nudaha dhaawaca waa unug jilicsan oo aan dhammaystirnayn (sida halkan lagu sharxay) oo waxay noqon kartaa mid hordhac u ah mid kale nabar yar yar.
Ciriirigaani wuxuu sababaa muruqyada inay bararaan oo ay cadaadis saaraan tibia - taas oo iyana keenta xanuun, barar iyo barar labadaba. Sidaas awgeed xisaabintu waa mid aad u fudud. Waa inaad samaysaa awooddaada, iyo sidoo kale bogsashada, si aad uga badato culayska aad u soo bandhigto xuubka lafaha. Habkan, waxay awoodi doonaan inay naftooda dayactiraan inta u dhexeysa jimicsiga waxaadna awoodi doontaa inaad ku noqoto farxadda orodka iyo socod dheer mar kale. Qeybta xigta, waxaan kaga hadli doonaa waxyaabo badan oo ku saabsan sababaha halista, sababaha iyo arrimo kale oo ay tahay inaad ka digtoonaato.
2. Osteomyelitis soo noqnoqda = Inta badan Cillad Muruqyada iyo Tendons -ka
Runta adag ayaa ah inaad aad u tabar daran tahay oo aadan u adkaysan karin caddadka walaaca ee aad la kulanto. Sababta caamka ah ayaa ah in aad kordhisay xaddiga tababarka si degdeg ah. Marna maaweelo inaad maqasho, laakiin taasi waa sidaas Dhinaca kale, waxa aad u fiican inaad maqasho ayaa ah inaad wax ka qaban karto arrintan adoo ka hadlaya sababaha soo socda.
- Qaab dhismeedyada Anatomical ee yareeya Xuubabka Afka
Xuubka lafuhu wuxuu ku tiirsan yahay dhowr dhisme oo kale si loo yareeyo loona yareeyo culeyska shoogga. Xaaladda daciifnimada muruqyada ee dhismayaasha naxdinta-nuugaya, sidaas ayaanu ku helnaa culeys badan - natiijaduna waa… osteomyelitis. Muruqyada ugu muhiimsan ee yareeya dhuuxa lafta waxaa laga helaa:
Waxaad si toos ah ugu tiirsan tahay shaqada, dabacsanaanta iyo xoogga dhismayaashaan si aad awood ugu yeelatid inaad yareyso xuubka lafaha. Awoodda iyo awoodda kordhaysa ee kooxaha muruqa ee aan soo sheegnay ayaa sidoo kale leh faa'iido weyn oo ah inay ka hortagi karaan dhibaatooyinka jilibka iyo dhaawacyada kale ee isboortiga. Sidoo kale ogow inaan xusno dabacsanaan - yacni natiijooyin dhaqdhaqaaq wadajir ah oo wanaagsan. Mid sinta adag, canqowga eller back ma laha la qabsi la mid ah ama barkinta sida sinta oo leh dhaqdhaqaaq caadi ah. Tani waa sabab caadi ah oo xitaa dadka xoogga leh ay sidoo kale u xanuunsadaan osteomyelitis - si fudud uma laha dhaqdhaqaaq ku filan oo ay kula qabsadaan culeyska naxdinta leh.
3. Sababaha Halista: Baro Tabar -darradaada
Aynu daacad noqonno. Badankeena waxaan ognahay qaar ka mid ah daciifnimadayada - waana halkaan meesha aad ka bilaabi lahayd. Haddii aad leedahay muruqyada misigta oo aad u daciif ah ama muruqyada xudunta markaa waxaad caqli u leedahay inaad tababarto kuwan. Ama haddii aad ogtahay inaad ku saabsan tahay u dhaqaaqida sida dhabta dhabta ee dhabarka hoose markaa kani waa inuu noqdaa diiraddaaga koowaad.
Waxyaabaha kale ee ay tahay inaad iska ilaaliso inta lagu gudajiro muddada tababarka ayaa ah:
Wax badan ha ku socodsiin meelaha dhaadheer.
Ha ku orodin kabo duugoobay, maxaa yeelay kuwani waxay leeyihiin barkin xun.
Iska ilaali inaad aad ugu dheeraato laamiga iyo meelaha la midka ah.
Ka fogow isboortiga oo ku lug leh "bilow iyo joogsi".
Dadka leh cagaha fidsan iyo kilkilaha adag waxay aad ugu nugul yihiin qoorgooyaha. Haddii ay ku saameyso cagaha fidsan ama qaansooyinka qallafsan, waa inaad sidoo kale diirada saarto kabaha wanaagsan oo leh barkin dheeraad ah, sharabaaddo riixo oo loogu talagalay socodsiinta (eeg tusaalaha halkan - iskuxirku wuxuu ka furmay daaqad gooni ah), iyo sidoo kale qiimaynta marooyinka (cilmi baaristu waxay muujisay in kala duwanaanshaha jaban uu u shaqeeyo sidoo kale kuwa qaaliga ah, markaa ha ku kadsoomin). Sidoo kale xusuusnow inaad waqti ku filan ka qaadato soo kabashada inta u dhaxaysa kalfadhiyada - ka warran fadhiga dabaasha ee u dhexeeya orodka? Kuwo kale waxay kaloo isticmaalaan sharabaadyo isku -buufin, sida kuwa aan kor ku soo sheegnay, si ay u kiciyaan wareegga korodhka lugaha iyo cagaha marka la nasanayo. Daraasaduhu waxay muujiyeen in sharaabaadyada noocaan oo kale ah ay yarayn karaan dheecaanka aan loo baahnayn iyo falcelinta bararka (bararka), iyo sidoo kale inay kor u qaadaan soo kabashada degdegga ah.
Markaa waxay ahayd waqtigii aan ka gudbi lahayn afarta layli ee aan kuu ballan qaadnay. Waxaan diiradda saarnay barnaamij tababar diiradda saaraya oo ka kooban afar layli. Dhawaan, waxaan sidoo kale sameynay fiidiyow tababar ah oo ka dhan ah osteomyelitis oo ka kooban shan jimicsi - iyadoo fiidiyowga uu ka hooseeyo sharraxaadda afartaas layli.
1. Kor u qaadista lugta dambe (oo leh ama aan lahayn jimicsi)
Sidaan hore u soo sheegnay, xasilloonida sinta ayaa fure u ah marka ay timaaddo lafaha caafimaad qaba ee lugaha caafimaad qaba. Tani waa sababta oo ah muruqyada miskaha waxay leeyihiin qayb weyn oo ka mid ah mas'uuliyadda marka ay timaado saameynta culeyska marka aan soconno iyo socodsiinno.
Si kale haddii loo dhigo, sinta si fiican loo xoojiyay waxay si toos ah uga hortegi kartaa osteoporosis iyo ciriiriga. Waa tan sida loo sameeyo layliga: U jiifso dhinaca gacanta gacanta ku heysa horteeda iyo madaxa gacanta nasashada.
Ka dib kor u qaad lugta kore dhaqdhaqaaq toosan (afduub) oo ka durug lugta kale - tani waxay horseed u tahay tababar wanaagsan oo ku saabsan moolka fadhiga iyo muruqyada sinta. Ku celi layliga 10-15 ku celcelin in ka badan 3 nooc - labada dhinacba.
2. Suul-qaadista / suulka
Kor u qaadista suulku waa jimicsi aad iyo aad muhiim ugu ah dadka jecel orodka ama orodka - mid ka mid ah jimicsiyada ugu muhiimsan marka ay timaado kahortaga cudurka osteomyelitis / cuncun - ama adiga oo jecel inaad lugahaaga ku socoto xanuun la'aan.
Marka runti waa mid ka mid ah laylisyada ugu fiican ee aad sameyn karto haddii aad rabto in aad ka hortagto dhibaatooyinka cagaha, canqowga, lugta iyo jilibka. Ka bilow maanta mar hore.
Booska A: Ku bilow cagahaaga meel dhexdhexaad ah.
Booska B: Farahaaga si tartiib ah kor ugu qaad cagahaaga - adigoo hoos ugu riixaya xagga kubbadda cagta.
- Samee 10 ku celcelin ka badan 3 set, oo ah 3 x 10.
3. "Socodka socod baradka" oo laastikada ah
Mid ka mid ah jimicsiyadayada aan jecel nahay, maadaama aysan kaliya u shaqeyneynin lugahaaga laakiin sidoo kale waa jimicsi wax ku ool ah oo loogu talagalay jilbaha, miskaha iyo miskaha. Waqti yar kadib jimicsigaan waxaad dareemeysaa inuu si qoto dheer ugu gubmayo muruqyada kursiga, laakiin hab fiican.
Raadi koox tababar ah (oo la doorbidayo jimicsiga noocan ah - kaas oo lagu xidhi karo kudhaw labada jilibba sidii oo kale.
Markaa istaag cagahaaga oo kala-ballaadhsan oo kala fog si ay u jirto iska caabin wanaagsan laga bilaabo suunka illaa anqawyadaada. Kadib tag, inta aad ka shaqeyneyso inaad lugahaaga ballaadhiso, xoogaa Frankenstein ama hooyo ah - halkan magaca. Layligu waxaa lagu sameeyaa gudaha 30-60 ilbidhiqsi ka badan 2-3 gogol.
4. "Cabbir suul oo shukumaan"
Layli aad ufiican oo xoojinaya garabka lugta iyo muruqyada cagaha wax ku ool ah. Sidaan horeyba u soo sheegnay, muruqyada cagahaagu waa difaacaaga ugu horreeya marka ay timaaddo orodka iyo barkinta habboon. Muruqyada aad u xoog badan ee aad ku haysato cagahaaga, fursadda yareynta dhaawaca iyo rarka badan.
VIDEO: 5 Jimicsi oo looga soo horjeedo Meningitis
MUUQAAL: 10 jimicsi oo xoog ah oo lagaga soo horjeedo miskaha xanuunka daran
Ka dib oo dhan, waxaan carrabka ku adkeynay muhiimadda ay leedahay jaakad shaqeyneysa iyo xoog badan, sidaa darteed waxaan halkaan kugu heynaa toban layli sinta misigta ah oo aad u ogaato in tani ay tahay mid ka mid ah daciifnimadaada. Kuwaan waxaa la samayn karaa ilaa afar jeer toddobaadkii waxayna ku habboon yihiin qof walba. Laakiin xusuusnow in ay tahay sii socoshada waqtiga oo muhiim u ah marka ay timaaddo tababarka.
Ku soo biir qoyskeena! Xor baad u tahay inaad si bilaash ah ugu biirto kanaalka barnaamijyo jimicsi oo dheeraad ah iyo cusboonaysiinta caafimaad ee wargelinta ah.
Daaweynta iyo Is-tallaabooyinka ka dhanka ah Osteomyelitis
Daaweynta Muruqyada Lugta Adag iyo Cagaha
Daaweynta mawjada cadaadiska ee ka soo horjeeda periosteum
Is-tallaabooyin wanaagsan oo wanaagsan waxaa ka mid ah sharaabaadyo riixo iyo kubbado duugis ah
Daaweynta osteomyelitis, takhtarku wuxuu baari doonaa shaqada lugta, cagta iyo canqowga. Badanaa, baaritaanka shaqadu wuxuu muujin doonaa murqo cad oo lugaha iyo cagaha ah. Labadan arrimoodba waxay si toos ah ugu biirin karaan osteomyelitis, maadaama ay saameeyaan nuugista shoogga ee cagta iyo canqowga. Waxa intaa dheer tan, muruqyada kubka oo cidhiidhi ah oo kacsan ayaa saamayn toos ah ku yeelan kara dhaqdhaqaaqa canqowga. Anqawga adag sidoo kale wax faa'ido ah ma leh marka laga hadlayo orodka iyo rarka awoodda. Miskaha iyo dhabarku sidoo kale waxay ka ciyaaraan kaalin dhexe marka la ordayo - sidaa daraadeed kuwani sidoo kale waa muhiim in la baaro. Adigoo wax ka qabanaya arrimahan acupuncture -ka isboortiga, shaqada muruqa, abaabulka wadajirka canqowga iyo sinta, ama daaweynta mowjadda cadaadiska, mid ayaa soo celin kara shaqadii caadiga ahayd.
Nidaam kasta oo daaweyn ayaa had iyo jeer kala duwanaan doona iyadoo ku saleysan bukaanka shaqsiga ah, laakiin daaweynta duugista iyo cadaadiska cadaadiska ayaa badanaa loo isticmaalaa osteomyelitis. Hababkaan daaweynta waxaa sida caadiga ah sameeya fiisiyoterabiga ama lafopractor casri ah. Daraasadaha cilmi -baarista, oo ay ku jiraan lagu daabacay joornaalka caafimaadka Joornaalka Mareykanka ee Daawada Isboortiga, ayaa muujisay in daaweynta hirarka cadaadiska ay leedahay saamayn si fiican loo diiwaangeliyey oo ka dhan ah osteomyelitis (1). Qof walba waaxyadayada caafimaad ee ay leedahay Vondtklinikkene wuxuu leeyahay qalab mawjad cadaadis oo casri ah, iyo sidoo kale khibrad u leh acupuncture isboortiga.
Is-Wax-u-Qabasho: Maxaan Naftayda U Samayn Karaa Osteomyelitis?
Ogaanshaha iyo lahaanshaha is-tallaabooyin wanaagsan ayaa had iyo jeer faa'iido leh. Markaan ku talineyno is-tallaabooyin, waxaan si gaar ah uga welwelsannahay tallaabooyin si joogto ah loo isticmaali karo oo gacan ka geysanaya sidii wax looga qaban lahaa sababta keentay dhibaatada. Sidaa darteed, saddexda talo ee halkan ku jira waxaa ka mid ah tallaabooyinka ka hortagga iyo daaweynta labadaba.
Talo soo jeedin 1: Sharaabadaha cadaadiska ee Lugta iyo Cagta
Tallaabada ugu fudud uguna hawl yar ee ku wajahan caafimaadka cagta iyo lugta. Xirashada sharabaadada cadaadiska marka la ordayo, laakiin sidoo kale marka la nasanayo, waxay bixin kartaa faa'iidooyin dhowr ah. Waan ognahay, iyo waxyaabo kale, in ay bixiso wareegga dhiigga oo kordhay, iyo sidoo kale soo kabasho degdeg ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka orodka ayaa ah inay kaa caawin karto ka hortagga ku -ururinta lactic acid ee muruqyada. Sharaabado riixo (iskuxirku wuxuu ka furmay daaqad cusub) haddaba waa wax aan had iyo jeer ku talinno bukaannada qaba dhibaatooyinka lugta - oo ay ku jiraan osteomyelitis.
Talo soo jeedin 2: Keebka Kubadaha dhibic
Kubadaha duugista waxaa loo isticmaali karaa in lagu kiciyo wareegga muruqyada kubka ee daalan. Waxay sidoo kale gabi ahaanba ku qumman yihiin in loo adeegsado cidhifka hoose ee cagaha - waxayna kaa caawin karaan inaad siisid fascia plantar yar oo kacsan (saxanka tendonka ee hoosta cagta). IWM dhammaystiran oo leh cabbirro kala duwan oo kubadaha duugista ah (eeg tusaalaha halkan - iskuxirku wuxuu ka furmay daaqad cusub) ayaa kuu sahli karta inaad ku isticmaasho saami badan oo muruqyada jirka ah. U isticmaal maalin kasta labada lugood iyo cagaha labadaba - laga yaabee inaad sidoo kale sinta iyo kursiga. Sidan, muruqyadu waxay haystaan ​​waqti ay ku soo kabtaan inta u dhexeysa kalfadhiyada.
Talo soo jeedin 3: Tababar la leh Miniband
Suumanka yaryar ayaa ah mid aad u fiican oo dabacsan oo loogu talagalay adiga oo doonaya inaad u tababarto miskahaaga, dhabarkaaga iyo miskahaaga hab ammaan ah. Tababbarka laastikada ayaa kaa caawin kara inaad muruqyada u soocdo si wax ku ool ah oo dabacsan. Sidaad arki karto, waxaan sidoo kale ku isticmaalnaa labadan layli oo lagu taliyay barnaamijkayaga tababarka. Tani waxay gacan ka geysan kartaa natiijooyinka wanaagsan ee tababarkaaga. Waxaan si farxad leh kugula talineynaa xargaha yar -yar ee cagaaran (dhexdhexaad) kuwa aan horay u tababarin wax laastikada ah. Markaa waxaad u rogi kartaa buluug (dhexdhexaad-adag) ugu dambayn. Daabac iyada si aad u aragto tusaalooyin oo aad u akhrido wax badan oo ku saabsan baararka yaryar (iskuxirka ayaa ka furmay daaqad cusub).
Ma taqaanaa qof la ildaran Osteomyelitis? Si xor ah ula wadaag maqaalka iyaga.
Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto YouTube eller Facebook haddii aad qabtid su'aalo ama wax la mid ah oo ku saabsan osteomyelitis. Waxaad kaloo arki kartaa dulmar rugaha caafimaadkeena adoo adeegsanaya xiriirka halkan haddii aad rabto inaad ballansato latalin. Qaar ka mid ah waaxyadeenna loogu talagalay Rugta Xanuunka waxaa ka mid ah Xarunta Caafimaadka ee loo yaqaan 'Eidsvoll Healthy Chiropractor Center iyo jimicsiga jirka (Viken) iyo Lambertseter Chiropractor Center iyo Jimicsiga Jirka (Oslo). Anaga, karti-xirfadeedka iyo bukaanku had iyo jeer waa kuwa ugu muhiimsan.
PAGE xiga: - Maxaad Ka Baran Laheyd Cudurka Osteoarthritis ee Miskaha
Guji masawirka ama isku xirka sare si aad ugu dhaqaaqdo bogga xiga.
Xor ayaad u tahay inaad nagu soo raacdid Social Media
(Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan farriimaha iyo su'aalaha 24 saac gudahood. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaan kuu sheegno jimicsi ku habboon dhibaatadaada, kaa caawin doona inaad hesho daaweeyeyaasha lagugula taliyay, tarjumi jawaabaha MRI iyo arrimo la mid ah.
Ilaha iyo Cilmi baarista:
1. Rompe et al, 2010. Daaweynta mawjadda shoogga shoogga ee tamar-yar oo tamar-yar ah oo ah daaweyn loogu talagalay cilladda murugada tibia ee dhexda. Am J Sports Med. 2010 Jan; 38 (1): 125-32.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Beinhinnebetennelse.jpg?media=1648573622 400 650 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-11-30 10:23:302021-09-12 16:00:034 Layliyo Ka dhan Ah Qoorgooyaha
Isbedelada Qaabka (Nooca 1, Nooca 2 & Nooca 3) 5 Layli ka dhan ah cudurka loo yaqaan 'Scoliosis'